Ngwaọrụ 5 iji lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke CD ma ọ bụ DVD | Akụkọ akụrụngwa
N'agbanyeghị eziokwu na taa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-emekarị chekwaa ozi di nkpa na igwe oji na ọrụ ọ bụla ị debanyere aha na gburugburu ebe a, a ka nwere ndị ọzọ ọnụ ọgụgụ ndị ha na-edebe ozi ndị dị mkpa na diski CD-ROM ma ọ bụ DVD ha. Ọ bụrụ na ịnwebeghị ike nyochaa ihe ọmụma dị na diski ndị a ruo ogologo oge, ịnwere ike ịme ya ugbu a n'ihi na ha nwere ike ịbịaru nso.
Oge ụfọdụ gara aga ekwuru ya na akụkọ dị iche iche na weebụ, na batrị nwere ohere ịmalite mmebi ma ọ bụ mebie diski CD-ROM ma ọ bụ DVD ndị a, bụ n’ihi na ndị ọrụ ha debere ha n’ebe ndị na-ekwesịghị ekwesị. Ya mere, na i nwere ike tufuo obi abụọ, n'okpuru anyị ga-kwuru ole na ole ngwaọrụ nke Windows ga-enyere gị aka ịmata ma ọ bụrụ na ndị discs bụ nke ogugu ma ọ bụ.
1 Ọ́ bụrụkwanụ na m achọta diski-CD ma ọ bụ DVD a na-apụghị ịgụta agụta?
2 Onye nyocha VSO
3 Onye na -agụ CDReader 3.0
Ọ́ bụrụkwanụ na m achọta diski-CD ma ọ bụ DVD a na-apụghị ịgụta agụta?
Ngwá ọrụ ndị anyị ga-ekwu ntakịrị oge ga-enyere gị aka mara ma ebe nchekwa ndị a dị mma; Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, ọ nwere ike ịbụ ezigbo echiche ka ịmalite mee nkwado ndabere nke ozi gị na draịvụ ike dị na mpụga ma ọ bụ na ebe nchekwa ọ bụla dị n'igwe ojii; Ugbu a, ọ bụrụ na ụfọdụ diski ndị a nọ n'ọnọdụ dị njọ ma na nyocha ị nwere ike ịhụ ngọngọ ọjọọ, ị nwere ike iji nke ọ bụla ọzọ anyị kwuru n'isiokwu bu nke a ụzọ, nke ga-enyere gị aka weghachite ọtụtụ ozi enwere ike ịghaghachi ya na draịva ndị ahụ.
Onye nyocha VSO
Ihe mbu ozo ikwuru nwere aha «Onye nyocha VSO«, Nke bụ kpam kpam free na-enye gị a nnukwu ego nke ọmụma mara banyere CD-ROM ma ọ bụ DVD diski na ịtinye na onye kọmputa tray.
Abụọ mbụ taabụ nke a ngwa ga-agwa gị banyere ụdị nke disk nakwa dị ka ngwaike na-agụ ya. Igbe nke atọ (Nyochaa) bụ nke ahụ bido were ule na agu ihe iji chọpụta ntụkwasị obi pasent nke diski CD-ROM a na-enye gị.
Onye na -agụ CDReader 3.0
Ngwaọrụ a aha ya bụ «Onye na -agụ CDReader 3.0»Nwekwara onwe ya ma bia na interface yiri nnọọ ka ihe ị ga - ahụ na Windows Explorer.
Nke a pụtara na ị ga-ahọrọ diski n'akụkụ aka ekpe wee pịa bọtịnụ "Gụọ" iji malite nyocha ahụ n'oge ahụ.
Na a nnọọ mma interface karịa gara aga uzo ozo, «Emsa DiskCheck»Ga - enyere gị aka ịhọrọ draịva ịchọrọ iji nyochaa ma chọta ozi ndị ọzọ na weebụsaịtị onye nrụpụta.
Ngwaọrụ ahụ bụ n'efu, ọ bụ ezie na mgbe ịmalite usoro nyocha, a ga-eduzi gị na weebụsaịtị onye nrụpụta iji nweta koodu ọrụ; n'otu oge ị ga-idetuo na mado ya na nwoke ohere nke ngwá ọrụ na-eji ya dị ka ogologo dị ka ị chọrọ.
Ngwá ọrụ a akpọrọ "dvdisaster" ga-anwa n'ezie iji nyochaa ọnọdụ diski gị, na-aga n'ihu n'ihu weghachite ozi site na ya ruo ogologo oge o kwere mee.
Nke a bụ nnukwu ihe ọzọ iji mee, ebe ọ bụ na iweghachite ihe ọmụma na-eji koodu mgbazi emezigharị nke na-eme ka ọ dịkwuo mmịpụta nke ozi ahụ, ihe enwere ike inweta site na faịlụ Rar abịakọrọ.
N'adịghị ka ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha na mbụ, «Nero DiskSpeed»E gosipụtara ya na interface ebe onye ọrụ nwere ike ịlele nke bụ ngalaba dị mma na nke nọ n'ọnọdụ ọjọọ.
N'ime interface ya ị nwere ike ịkọwa ọsọ nke ịchọrọ ka nyocha ahụ wee rụọ; nsonaazụ kacha mma ị nwere ike nweta na obere ọsọ N'ụzọ nke a, a ga-eme nyocha site na byte.
Tupu ịmalite nyocha ahụ na nke ọ bụla n'ime ihe ndị ọzọ anyị kpọtụrụ aha n'elu, ị ga-ahụrịrị na CD-ROM ma ọ bụ diski DVD dị ọcha kpamkpam na ihu ebe a na-agụ ihe ahụ, nke na-abụkarị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. Odu mme ini emi mmo ekekemede nweta aha mkpisi aka na mpaghara kwuru, si otú ahụ na-eme ka ọ ghara inweta ya ozi dị ka nke a dị ka a disk njehie. Ọ bụrụ na ị jiri nhicha silk hichaa ya (otu n'ime ndị a na-eji ọcha ugogbe anya iko) ị ga-ewepụ nnukwu ihe puru omume nke njehie nwere ike ibute na ngwaọrụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ngwaọrụ 5 iji hụ iguzosi ike n'ezi ihe nke diski CD ma ọ bụ DVD gị na Windows
Magburu onwe ya, anọ m na-achọ mmemme ga-enyocha ọkwa CD na DVD. Ma enweghi otutu ozi na web.
Zaghachi na Heliopaner
Esi tinye MS Office Serial Mba na-akpaghị aka mgbe arụnyere